Kulankii shalay, Qaybsankii Guddiga iyo Saluugii Mucaaradka | Somaliland.Org
Kulankii shalay, Qaybsankii Guddiga iyo Saluugii Mucaaradka
April 27, 2009	Qodobada Go’aan muran dhaliyay oo guddiga dhex-dhexaadintu hordhigeen saddexda hoggaamiye
Hargeysa (Ogaal)- Guddiga dhexdhexaadinta khilaafaadka taagan, ayaa shalay mar kale isugu yeedhay hoggaamiyeyaasha saddexda xisbi Qaran ee Somaliland, una gudbiyeen qoraal xambaarsanaa qodobo ay ku soo ururiyeen dooddihii dhinacyadaasi is dhaafsadeen kulankoodii Sabtidii. Hase yeeshee, waxa la sheegay in guddigu go’aankaa dib ula noqdeen ka dib markii ay dhexdooda isku khilaafeen.
Sabtidii doraad ayaa guddiga dhex-dhexaadintu kulmiyay guddoomiyeyaasha xisbiyada Mucaaradka (UCID iyo KULMIYE) ah Faysal Cali Waraabe iyo Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, isla markaana guddigu waxay kulankaa ku dhegaysteen doodda labada dhinac. Mucaaradku waxay qadimeen dacwad midaysan oo xambaarsanayd gar-naqsigooda. Dhanka kalena, Madaxweyne Rayaale wuxuu ka dhiibtay gar-celis aragtida Mucaaradka ka horjeeday. Hase ahaatee, labada dhinacba waxay kalsooni buuxda siiyeen guddiga dhexdhexaadinta, waxayna balanqaadeen in dhinac waliba aqbali doono natiijada waxa uu guddigu soo go’aamiyo. Sidaas darteed, guddiga dhexdhexaadintu waxa la sheegay inay isla gelinkii dambe ee Sabtidiiba kulan ka yeesheen arrintaas, isla markaana ay shalay gelinkii horeba mar kale isugu yeedheen Madaxweynaha iyo Guddoomiyeyaasha xisbiyada Mucaaradka ah.
Inkastoo aanu jirin war loogu talogalay Saxaafadda oo si toos ah uga soo baxay guddiga dhexdhexaadinta, haddana sida Wargeyska Ogaa ka soo xigtay ilo lagu kalsoonyahay, Ergadu waxay kulankan shalay ugu qadimeen saddexda hoggaamiye qoraal la sheegay inuu xambaarsanaa 19 qodob oo u dhignaa go’aanka ay guddigu ka gaadheen dacwadii dhinacyadaas. “Ma jiro qoraal guddigu soo saaray, kulankii maantuna (shalay) wuxuu ahaa mid aanu ku sii amba-qaadaynay hawshayada, yidhi Guddoomiyaha Guddigaas Aadan Baxnaan oo aanu xalay khadka Telefoonka wax kaga waydiinay arrintaas.
Hase yeeshee, warar laga soo xigtay ilo xogogaal ahi waxay tibaaxeen in kulankaa shalay dhexdiisa ay isku maandhaafeen guddiga dhexdhexaadinta laftoodu, ka dib markii ay ku qaybsameen qoraalka ay badka keeneen, kaasoo wararku tibaaxeen in xubnaha qaarkood muujiyeen in aanay ogayn. Xoguhu waxay intaa ku dareen, in hoggaamiyeyaasa Mucaaradku ay qawadeen qoraalkaa oo ay u arkeen mid aan waxba ka soo qaadin qodobadii muhiimka ahaa ee dacwadooda, isla markaana soo qaatay oo keliya qodobo aan mugdiga ka saarayn wax waliba sida ay noqonayaan oo la xidhiidha gar-celiskii Madaxweynaha oo keliya. Sidaa aawadeed, wararku waxay tibaaxeen, in khilaafkaa Gudiga dhexdiisa ee muuqday iyo saluugaa ka dhashay qoraalkoodu uu sababay in ay dib ula noqdaan.
Inkasta oo Go’aanka rasmiga ah uu guddigu sheegay in uu soo saarayo Salaasada, hadana, qoraalka go’aanka shalay badka yimi qodobadiisu nuxur ahaan waxay u dhignaayeen sidan;
In kordhinta muddada Xukuumadda uu u kordhiyay Golaha Guurtidu ay tahay mid Sharci ah oo lagu dhaqmayo ilaa Octoober 29, 2009.
In aan muddo dambe loo kordhin Xukuumadda, si aan khilaaf dambe uga dhicin dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isagoo adeegsanaya awooodiisa Sharci waa inuu Komishanka Qaranka ku riixaa sidii doorasho xor iyo xalaal ahi dalka uga dhici lahayd. Iyadoo dhinacyo badani walaac ka muujiyeen waxqabadka Komishanka Qaranka, waxaanu soo jeedinaynaa in Madaxweynaha, labada Guddoomiye ee xisbiyada Mucaaradka ahi iyo Guurtidu ay dib-u-qiimayn ugu sameeyaan sidii loo toosin lahaa Komishanka.
In xilalka Qaranka iyo awooddaha dawladda si siman loo isticmaalo, sida;
a)- xilalka Qaranka
d)- awoodda Ciidanka
e)- qodobadda ka tirsan shanaad, looma diidayo wixii dawladda Sharci u siinayo adeegsigeeda, laakiin waa wixii u adeegaya xisbi gaar ah, cid kalena lidi ku ah.
6. Waa in Axsaabta Mucaaradku ay ku ixtiraamaan masuuliyiinta Qaranka xilka ay umadda u hayaan.
7. Saddexda Xisbi waa inay u madaxbanaanaadaan hawl-maalmeeedkooda Xisbi, una madaxbanaanaadaan qabashada kulamadooda iyo Banaan-baxyada, iyagoo raacaya xuquuqda Distoorku siinayo iyo xeerarka dalka.
8. In qofka kasta oo muwaadin ah la dhowro Xuquuqda aasaasiga ah ee uu siinayo Distoorku oo aan lagu xadgudbin.
9. Cidda u tartamaysa Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenku waa inay dhowrto sharafta iyo karaamada xilka ay u tartamayaan.
10. Curfiga dawliga ah ee lagu dhaqmo wuxuu ina farayaa in cida u tartamaysa xilka Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenku ay yeeshaan xasaanad, xurmo iyo la ilaaliyo.
11. Si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah, waa in si buuxda loo adeegsado bulshada Rayidka ah, la martiqaado goob-joogeyaal Caalami ah, ilaaliyeyaasha Axsaabta la xulo, isla markaana kor loo qaado ee guddiga ilaalinta iyo Anshaxa ee doorashooyinka.
12. Natiijada ugu dambaysa ee Server-ku waa inay soo baxdaa waqti siinaya Komishanka Qaranka, Axsaabta iyo cidii ku lug leh doorashooyinkaba inay hawlahooda si buuxda ugu gudan karaan muddo ku filan.
13. Hab-dhaqanka Guddiga Doorashooyinku waa inuu muujiyaan dhex-dhexaadnimo, wada-tashi iyo wada-shaqaynta Axsaabta Qaranka.
14. Guddiga doorashooyinku waa inuu soo saaro qorshe hawleedka uu doorashada ugu talogalay si loola socdo hawsha doorashooyinka.
15. Heshiisyada saddexda xisbi gaadhaan, waa inay ahaadaan kuwo si buuxda loo ixtiraamo, looguna dhaqmo, xisbi kastaana aanu noqon mid ka baxa marka uu danihiisa ka dhex arki waayo.
16. In la sii daayo dhamaan dadka la xidhay, loona xidhay arrimaha siyaasadda intii khilaafka siyaasaddeed taagnaa.
17. Heshiiskan waa inay saxeexaan saddexda xisbi qaran.”